Izaho amin’io tena ontsa ny foko mahita an’ilay olona. Tena mijaly. Tsy hoe doran’ny afo fotsiny fa miala ny hodiny, dia lalovan’ny afo, dia avy eo misy hoditra indray, dia doran’ny afo indray. Dia toa izany hatrany.
“Tena gravy izany ho’aho”, hoy Yves : “Tany amin’ny helo, mirotsaka ohatra ny “jackpot” ny olona, kanefa aty an-danitra toa mangina be…! Mbola vitsy ny olona miova fo marina ho an’Andriamanitra. Mampihorin-koditra!”, hoy ihany izy.
Eo amin’ny ankohonanao
Eo amin’ny namanao
Eo amin’ny fiaraha-monina misy anao (an-tanàna, any am-piasana ets…)
Eo amin’ny firenena (Madagasikara) izay misy anao.
“Dia ohatra an’ilay tany Japon ve zany, Jesosy ?, hoy Yves. “Tena efa nahery be ange ny horohoron-tany sy ilay “tsunami” ary ny problema hafa mahazo an-dry zareo taorian’iny e !”.
“Ie, marina izany tenenin’i Yves izany fa izao, tena mbola mihoatra lavitra noho iny no hahazo an’io firenena iray io satria hofoanako tsy hisy intsony izy”.
“Afaka lazainao ahy ve Jesosy hoe rahoviana marina ianao no ho tonga any?”
Sady nihomehy Izy no niteny hoe “tsy afaka hilaza izany aminao Aho satria ny Raiko ihany no mahalala izany fa ilazao fotsiny ny olona rehetra hiambina sy hiomana fa efa akaiky ny fotoana hiaviako.”
Aza variana amin’izao fiainana izao intsony ary aza manao kitoatoa ny fifandraisanao amin’Andriamanitra;
Saino ny any an-danitra ary atolory ho an’Andriamanitra ny fiainanao sy ny aminao rehetra. Ianao irery no erany ary tandremo sao tara fa tsy afaka manao na inona na inona aminao intsony Jesosy amin’izay fotoana izay.
Zarao amin’ny olona (na fantatrao na tsy fantatrao) ity hafatra ity fa izany no sitrapon’Andriamanitra. Ho faly Jesosy ny amin’izany fihetsikao izany ary hotahiany amin’izay hataonao rehetra ianao satria nahatanteraka ny “mission” nampanaoviny anao ianao.